Appartamento e campagna a 15 imizuzu da Firefox
Le ndlu ibekwe kumgangatho wokuqala wendlu yakudala yaselalini kumbindi weRomola, ilali encinci encotsheni yenduli yaseChianti ejikelezwe zizidiliya, iigrooves zomnquma kunye neenkuni, kumgama oziikhilomitha ezili-15 ukusuka eFlorence.
Indlu enelanga, esanda kubuyiselwa, inegumbi lokuhlala elikhulu elinekhitshi elivulekileyo nelixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokuhlambela elineshawari. Ingakwazi ukuhlalisa ukuya kwiindwendwe ezi-4.
Ukufika kwethu siza kukwamkela, sikunike izitshixo, sikubonise malunga neflethi kwaye sikunike iingcebiso ezisebenzayo.
ILa Romola yilali encinci kwiinduli zaseChianti uninzi lwazo luhlala. Ekubeni ibekwe kweyona ndawo iphakamileyo yedolophu yakudala yelali, le ndlu inombono we-360 degree kwiintlambo ezijikelezileyo ezigutyungelwe zizidiliya kunye nemithi yomnquma.
Kubo bonke ubude bokuhlala kwakho, ndiya kukuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo okanye ndinike naliphi na icebiso ukwenza utyelelo lwakho lube ngamava amnandi ngokwenene.